The Ab Presents Nepal » कम्युनिस्टले झगडा गरिदिए हाम्रो पालो आउँथ्यो भनेर कांग्रेसले नसोचे हुन्छ : प्रचण्ड
मदन भण्डारीको ६८ जन्मजयन्तीको अवसरमा शनिबार राजधानीको राष्ट्रियसभागृहमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले राजनीतिक हत्या प्रतिहत्याका दोषी पत्ता लगाइ भविष्यमा त्यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चिता गर्न नसकिएको बताए । मदन भण्डारीको हत्या नियोजित हो भन्ने सबैलाई लागेको भएपनि आज सम्म हत्यारा किटेर भन्न सक्ने प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेकाले भोली पनि त्यस्तै घटना दोहोरिन सक्ने संकेत उनले गरे ।
नेपालको इतिहासमा उच्च राजनीतिक हत्या प्रतिहत्याका भयानक र लामो श्रृंखला भएको उल्लेख गर्दै उनले ठुला ठुला राजनीतिक हत्या प्रतिहत्याका घटनाहरु रोक्ने प्रयासमा सरकार अहिले सम्म सफल हुन नसकेको बताए । मदन भण्डारी हत्या, उनका चालकको हत्या अनि दरबारहत्याकाण्ड भइसक्दा पनि अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता लगाउन नसकेको तर्फ गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले भने मैले पहिलोचोटी प्रधानमन्त्रीको नारायणहिटीको अगाडि उभिएर भने यसको पत्ता लाई छोडिन्छ तर पत्ता लगाउन सकिएन । के ले दिदैन हामीलाई ? जनताले नदिएको त पक्कै होइन । हामी अहिले सरकारमा छौ । सरकारको नेतृत्व गरेका छौ तर भन्न सक्ने ठाउँमा छैनौ ।
बरु यसलाई त्यसै त्यसै ढिला हुन दिउँ त्यसै ठिक हुन्छ भन्या जस्तो अवस्था हाम्रो छ । कमरेड मदन भण्डारीको रहस्यमय अवसान किन भयो र भोली त्यस्तै हुदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हामीले किन गर्न सकिराखेका छैनौ मेरो प्वाईन्ट त्यहाँनिर हो ।
उनले भने तपाई हामी यसलाई मदन भण्डारीको महानता ठान्छौ कि ? कमजोरी ? कमरेड मदन भण्डारीको देशभक्ति, उद्देश्य प्रतिको निष्ठा र प्रतिक्रियावादीहरु प्रतिको उहाँको वर्ग दृष्टिकोण हो त्यो । त्यस अर्थमा उहाँ महान हुनुहुन्थ्यो भनेर नै हामी भन्छौ । त्यसो भन्छौ भने कहिले काही मलाई चिन्ता लाग्ने कुरो के हो भने हामी आजभोली आफ्नो छाला बचाउन तिर लाग्नेमा त छैनौ कतै ? भाषा नरम गरेर नरिसाउन प्रतिक्रियावादी भन्ने तिर पो जान लागेका त छैनौ ?हामी मारिएका छैनौ अहिले सम्म । मारिन पनि सक्छौ । यहाँ विचारणीय छ ।
उनले भने दुई नेताको मात्रै असफलता हुनेवाला छैन । त्यो नेकपाको मात्रै असफलता हुनेवाला छैन । पार्टी एकता गरेर असफल भइसकेपछि कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरी यही रुपमा उठ्न सायदै संभव हुन्छ । सिद्धियो भने दुईटै एकैचोटी । अब यो पार्टी मात्रै सकिएर कांग्रेस छदै छ नि कांग्रेसले लिड गर्ला भन्ने स्थिति पनि नेपालमा अब छैन । कांग्रेसले कम्युनिस्ट पार्टी झगडा गरिदिएदेखि हाम्रो पालो आउँथ्यो भनेर सोच्दै नसोचे हुन्छ । हुनेवाला यो सिस्टम पनि जानेवाला छ र देशको एकता पनि खतरामा पर्नेवाला छ ।